Resistor အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း – NaingLinHan
November 2, 2016 November 2, 2016 /nainglinhan
Resistor တွေကို အဓိကအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်ခုအတွက် အသုံးများပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်က Current စီးဆင်းမှုကို ကိုယ်လိုသလောက် အနဲအများ သတ်မှတ်ဖို့ပါ။ ဥပမာ – 15V ဘက်ထရီ တစ်လုံးနဲ့ 30Ω Resistor တစ်လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့။ Current ဘယ်လောက် စီးမလဲ သိချင်ရင် Ohm’s Law နဲ့တွက်ပါမယ်။
I = 15/30
Ohm’s Law အရ Current ကိုလိုချင်ရင် Voltage ကို Resistance နဲ့စားရပါတယ်။ I နဲ့ R က ပြောင်းပြန် အချိူးကျတဲ့ အတွက် Current များများ စီးစေချင်ရင် Resistance နည်နည်ပဲပေးပြီး၊ Current နည်းနည်းပဲစီးစေချင်ရင် Resistance ကို ပိုပေးပြီးတော့ ကိုယ်လိုသလောက် Current ကို ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်။ အကယ်၍ 15V ဘက်ထရီကိုပဲ Resistor ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆို Current ဘယ်လောက် စီးမလဲ ?? 30Ω Resistor ကို ဖြုတ်လိုက်တဲ့ အတွက် ဆားကစ်မှာ Wire ကြိုး (Conductor) ရဲ့ Resistance ပဲရှိပါတော့မယ်။ Wire ရဲ့ Resistance ကတော့ Cable size နဲ့ အရှည်ပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Conductor တွေရဲ့ Resistance က အလွန်နည်းတဲ့ အတွက် 0.00001Ω လိုပဲ ယူဆလိုက်ပါမယ်။ အပေါ်က ပုံသေနည်းအတိုင်း တွက်မယ်ဆို Current (15/0.00001=150,000A) စီးသွားပါမယ်။ ဒါကျွန်တော်အရင် Understanding of Basic Electrical Quantities ဆိုတဲ့ Post မှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Current ပမာဏ အများကြီးစီးသွားတဲ့ Protective Devices မခံထားရင် အပူလွန်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Short circuit လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Resistor တွေကို ဒုတိယလုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် Voltage Divider အနေနဲ့ သုံးပါတယ်။ အောက်က ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း 17.5V ဘက်ထရီနဲ့ Resistor တွေကို Series ဆက်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ အမှတ် A,B,C တွေမှာ ရှိတဲ့ Voltage တွေ မတူတော့ပါဘူး။
A to D,17.5 V
B to C ,6V
Resistor တွေကို လိုသလို သွယ်တန်းပြီး လိုချင်တဲ့ Voltage ရအောင်ပြောင်းလဲ အသုံးချလို့ရပါတယ်။
ဒီ Resistor အမျိူးအစားကတော့ သူ့နာမည်အတိုင်းပဲ ohm တန်ဖိုး ကိန်းသေ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ Fixed Resistor အမျိူးအစားအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ composition carbon resistor ကို အသုံးများပါတယ်။ Carbon resistor ကို carbon graphite compound နဲ့ resin bonding material ကို ပေါင်းစပ်ပြီးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Carbon graphite နဲ့ resin bonding material တို့ ပါ၀င်တဲ့ အချိူးပေါ်မူတည်ပြီး resistance တန်ဖိုးတွေပြောင်းလည်းသွားပါတယ်။ Carbon resistor ကို ဈေးသက်သာအတွက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတော်တော်များများမှာ သုံးတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေရှိသလို မကောင်းတဲ့ အချက်တွေလဲရှိပါတယ်။ Resistor ရဲ့ သက်တမ်းကြာလာတဲ့ အခါ၊ အပူချိန်မြင့်လာတဲ့အခါမျိူးမှာ Resistance တန်ဖိုး ပြောင်းလည်းနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် resistance တန်ဖိုးတွေမြင့်လာပါတယ်။
Composition of Carbon Resistor
နောက်ထပ် Fixed resistor အမျိူးအစားကတော့ metal film resistor ပါ။ ဒီ resistor အမျိူးအစားက carbon resistor ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး သူ့ရဲ့သက်တမ်းအပေါ်လိုက်ပြီး resistance တန်ဖိုးပြောင်းလည်းခြင်း မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ tolerance က လဲ carbon resistor ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ Tolerance ဆိုတာက resistor ရဲ့ တန်ဖိုး အပေါင်း (သို့) အနုတ် ခြားနားချက်ပါ။ ဥပမာ – 100Ω resistor မှာ tolerance +10% ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ထို resistor ရဲ့ တန်ဖိုးက 110Ω ပါ။ အကယ်၍ -10% ဆို သူ့တန်ဖိုးက 90Ω ပါ။ Carbon resistor ရဲ့ tolerance က 5% ကနေ 20% ကြားမှာရှိတတ်ပါတယ်။ Metal film resistor ကတော့ 0.1% ကနေ 2% ကြားမှာပဲရှိပါတယ်။ Metal film resistor ကို ကြွေထည်ပေါ်ကို metal film လေးအုပ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ သုံးတဲ့ metal အမျိူးအစားနဲ့ အထူအပါးပေါ် မူတည်ပြီး resistance တန်ဖိုးပြောင်းလည်းသွားပါမယ် ပုံမှန်အားဖြင့် metal film ရဲ့ အထူက 0.00001 နဲ့ 0.00000001 လက်မကြားမှာရှိပါတယ်။
နောက်ထပ် Fixed resistor တစ်မျိူးက carbon film resistor ပါ။ ဒီ resistor အမျိူးအစားကလည်း ကြွေချောင်းပေါ်ကို carbon film အုပ်ပြီးတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Metal film resistor ထက် ထုတ်လုပ်ရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက် ဈေးနည်းနည်းပိုသက်သာပါတယ်။ Carbon resistor ထက်လည်း tolerance ပိုကောင်းပါတယ်။
Metal glaze resistor ကလည်း fixed resistor အမျိူးအစားပါပဲ။ Metal film resistor နဲ့ အလားသဏ္ဌန်တူပြီး သူကတော့ ကြွေအစား ဖန်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ metal အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး resistance တန်ဖိုးပြောင်းလည်းသွားပါမယ်။ Tolerance 1% နှင့် 2% ကြားရှိပါတယ်။
Wire wound resistor ဟာလဲ နောက်ထပ် fix resistor ပါပဲ။ ကြွေထည်အူတိုင်ကို ဝိုင်ယာကြိုးတွေပတ်ပြီးတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ သူရဲ့ resistance တန်ဖိုးက အောက်က အချက် (၃) ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလည်းနိုင်ပါတယ်။
၁. သုံးထားတဲ့ ကြိုးအမျိုးအစား
Wire wound resistor ကို အရွယ်အစားမျိူးစုံ ပုံစံမျိူးစုံတွေ့ရမှာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် power rating မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာ သုံးပါတယ်။ အခြား resistor အမျိုးအစားတွေထက် အပူချိန် ပိုမိုခံနိုင်ခြင်းက သူ့ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါ။ သူ့ရဲ့ အလယ် အူတိုင်က ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒိုးယိုပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အလျားလိုက်တပ်ဆင်ခြင်းက ဒေါင်လိုက် တပ်ဆင်ခြင်းထက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါတယ်။ အလယ်မှာဒိုးယိုပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အလျားလိုက် တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် တိုက်ခက်လာတဲ့လေကို အလယ်အူတိုင်ကို ဖြတ်စီးစေပြီး resistor မှ ထွက်လာတဲ့ အပူကို လျော့ချပေးပါတယ်။ အပူလွန်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ ဈေးနူန်းမြင့်ခြင်းနဲ့ တပ်ဆင်ဖို့အတွက် နေရာ အလွန်ယူခြင်းပါ။
Resistor တွေရဲ့ resistance တန်ဖိုးကို color code ဖတ်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။ Resistor မှာပါတဲ့ ရောင်စုံအရစ်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး သူ့ရဲ့ resistance တန်ဖိုး tolerance စသည်တို့ကို သိနိုင်ပါတယ်။ Resistor တွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အရစ် ၃ခု ကနေ ၅ခုထိ ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ ၄ ရစ်ပါတဲ့ resistor တွေမှာ ပထမ ၃ ရစ်က resistance တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံး တစ်ရစ်က tolerance တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ tolerance 1% နဲ့ military resistor တွေမှာ အရစ် ၅ရစ် ပါတတ်ပါတယ်။
ရောင်စုံအရစ်လေးတွေက တန်ဖိုးတွေပါ။ အရောင် တစ်ရောင်စီကို နံပါတ်တစ်ခုစီနဲ့ ကိုယ်စားပြုထားပါတယ်။ အောက်ကပုံမှာ အရောင်နဲ့ သူ့ရဲ့နံပါတ်ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမ နှစ်ရစ်က ဂဏန်းတန်ဖိုးဖြစ်ပြီး တတိယအရစ်က သူတို့ရဲ့ မြောက်ဖော်ကိန်းပါ။
ဥပမာ – Brown, green, red နဲ့ silver ၄ရစ်ရှိတဲ့ resistor တန်ဖိုးကို ဖတ်မယ်ဆိုပါစို့။ ပထမနှစ်ရစ် brown နဲ့ green ကိုဖတ်ရင် brown က 1, green က5ဖြစ်တဲ့အတွက် 15 ရပါတယ်။ တတိယ အနီရောင်အရစ်က2ပါ။ တတိယအရစ်က မြောက်ဖော်ကိန်းဖြစ်တဲ့ အတွက် 10 ကို power တင်ပြီး 15 နဲ့ မြောက်ပါမယ်။ 15 x 10² = 1500Ω ရပါတယ်။ နောက်ထပ် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ တစ်နည်းက တတိယအရစ်ကို0အရေအတွက်လို့ယူဆရမှာပါ။ တတိယအရစ်တန်ဖိုးက2ဆို 00, 3ဆို 000 ပေါ့။ ပထမနှစ်ရစ်ရဲ့ အနောက်မှာ0တွေထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
နောက်ဆုံး အရစ်က tolerance ပါ။ silver ရဲ့ tolerance တန်ဖိုးက ±10% ဖြစ်တဲ့အတွက် 1500 x 10% = 1500 x 0.1 = 150 ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Resistor ရဲ့ တကယ့် တန်ဖိုးက 1500+150 = 1650Ω နဲ့ 1500-150=1350Ω ကြားမှာ ရှိပါမယ်။
Resistor တွေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ power rating ရှိပါတယ်။ ထို rating ထက်ကျော်လွန်သွားရင် ပူပြီး resistor ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ Resistor တွေရဲ့ power rating နဲ့ ကိုက်မကိုက်ကို အောက်ပါ formula တွေနဲ့ တွက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
Example– The resistor hasavalue of 100Ω andapower rating of 1/2 W. If the resistor is connected toa10-V power supply, will it be damaged?
P = 10×10 / 100
ဒီ ဆားကစ်ရဲ့ power rating က 1W ဖြစ်ပြီး resistor ရဲ့ ခံနိုင်တဲ့ rating က 1/2W ဖြစ်တဲ့အတွက် အဖြေက resistor ပျက်စီးသွားမှာပါ။
အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့သမျှက fixed resistor ဖြစ်ပြီး resistance တန်ဖိုး ကိန်းသေတွေပါ။ အခုဆွေးနွေးသွားမှာက Variable resistor ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ resistance က ကိန်းရှင်တွေပါ။ Variable resistor တွေကို ပုံသဏ္ဌန်အမျိုးမျိူး Power rating အမျိူးမျိူးနဲ့ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အလင်းအမှောင် အပူအအေးပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလည်းနိုင်တဲ့ resistor တွေရှိသလို လက်ဖြင့်လှည့်ပြီးချိန်ညှိနိုင်တဲ့ resistor တွေရှိပါတယ်။ အောက်ကပုံမှာ Variable resistor တစ်လုံးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြထားပါတယ်။ သူရဲ့ တန်ဖိုးကို slide bar လေးကို ဘယ်ညာပို့ပြီး ဒါမှမဟုတ် သူ့ ဝန်ရိုးမှာပါတဲ့ အူတိုင်လေးကို လှည့်ခြင်းဖြင့် ပြောင်းလည်းနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သူရဲ့ total resistance က 100Ω ရှိတယ်ဆိုရင်။ သူ့ရဲ့ resistance တန်ဖိုးက0နဲ့ 100 ကြားပြောင်းလည်းနိုင်ပါတယ်။
Variable resistor တွေထဲမှာမှ လူသိများတာက potentiometer ပါ။ pot လို့ အတိုကောက်ခေါ်ပြီး rheostat လို့လဲ ခေါ်ကျပါတယ်။ တကယ်တော့ rheostat မှာ terminal ၂ ခုပဲ ရှိပြီး potentiometer မှာ ၃ ခုရှိပါတယ်။ Potentiometer မှာပါတဲ့ terminal ၃ခုက ၂ခုတည်းကိုပဲ အသုံးပြုပြီး rheostat ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Potentiometer ကို Voltage အမျိူးမျိူး ပြောင်းလည်းဖို့ အတွက် အဓိက အသုံးများပါတယ်။ အောက်ကပုံမှာ Variable resistor ရဲ့ terminal တစ်ခုကို 12Vsupply နဲ့ဆက်ထားပြီး အခြားတစ်ဖက်ကို Ground နဲ့ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ အလယ်က မြှားခေါင်းလေးနဲ့ Terminal ရဲ့ တစ်ဖက်ကို positive terminal နဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကို ground နဲ့ ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ အလယ် terminal လေးကို အပေါ်ကို ရွှေ့ရင် 12V ရမှာဖြစ်ပြီး အောက်ကို ရွှေ့ရင် 0V ရမှာပါ။ ကိုယ်လိုသလောက် Voltage ကို ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
Variable Resistor Used asaPotentiometer
Schematic Symbol of Resistors
Click Here To Save PDF Version
Categories: Electrical, General KnowledgeTags: Color Code, Electrical, General Knowledge, Resistor